Ngomlambo wohlwaya ... Intsebenziswano | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Ngomlambo wohlwaya ... ubambiswano
Amaphepha amaninzi ngokubambisana
Ukwabelana ngesondo, ukulingana nokukhanya
Ukuba emva kokuthandana okuphumelelayo kunye nesigaba esilandelayo sokuthathwa kwezinto zokuqala, ubomi bemihla ngemihla buzuza ngokusisigxina, izihlandlo zothando rhoqo zibaluleke kakhulu. Enye okanye olunye uhlwaya luthando lunokuqiniseka ukuba uthando aluyi kulala. Kodwa amalungiselelo ambalwa sele sele akwanele - uxinzelelo alufanele luvele.
Indlela yokudala ubusuku bothando - ukudala ubumbano
Ukuba kukho abantwana endlwini, ukuhlwa komtshato kusekhona. Ukuba unethuba lokunika abantwana kubantwana abancinci ubusuku bonke okanye ukuvumela abantwana abadala ukuba balele nabangani, ngokuhlwa kungonwabela kakhulu.
Kubantwana abancinci, nangona kunjalo, ukungabikho komntwana obusisondelene nobusuku obusondelene naye akuqhelekanga ingxaki. Emva koko, balala embhedeni kakhulu, ukuze i-romance ingene emva koko. Ngoko ke kungekhona ixesha elide kakhulu kumzila, kufuneka wenze amalungiselelo ngaphambili.
Akuyena wonke umntu unengcamango efanayo yothando. Umculo ohambelanayo kunye nokukhanya okucokisekileyo kubalulekile. Ngamakhandlela, qiniseka ukuba akukho mngcipheko womlilo. Olunye uhlobo lunikeza izibane zenyama. Amakhandlela amatsha e-LED anika ukukhanyisa okulula, kodwa akusiyo yonk 'ubani.
Ingcinga efanelekileyo yokuhlwaya yothando yinto yokutya esondlo ebini. Ukukhanyisa ikhandlela kunye neglasi efanelekileyo yewayini ngokukhawuleza kuvela umoya omnandi. Itheyibhile ecacileyo ngokukhawuleza idala ngokukhawuleza i-intlanethi eyahlukileyo kunokuba iphila kwansuku zonke.
Ukuba awufuni ukupheka okongeziweyo, kodwa kunye nobusuku obumnandi kwi-sofa kulungile. Nge-backlight efihlakeleyo, umhlobiso omuhle, isiselo esifanelekileyo kunye ne-nibble encinci, uya kufumana isiqalo esilungileyo kwisondlo sothando. Ingaba udibanisa, uthetha, uphulaphule umculo okanye ubukele iDVD ngumcimbi wokhetho lwakho.
Ngobusuku bobuhlanga kunye nomlingane
Ukuba emva kokuthandana okuphumelelayo kunye nesigaba esilandelayo sokuthathwa kwezinto zokuqala, ubomi bemihla ngemihla buzuza ngokusisigxina, izihlandlo zothando rhoqo zibaluleke kakhulu.
Ngoko ukuba imvakalelo yothando ayifuni, kufuneka uphephe amanye amanqaku. Akufanele uxoxe ngeengxaki kunye neengxaki. Ukuchazwa akuthethi ukuba kufuneka unqunyanyiswe - kukho ixesha linye ngosuku.
Ukuze u kisses uhlangabezane nothando, ukuphefumula kakubi kufuneka kugwenywe. Ukutya kunye negalikhi okanye i-anyanisi akufanele ke ukuba kwimenyu. Kwimeko embi, kuya kuba yinto encinane kunye nobusuku obusondelene. Ukuba le nto ayinakufika ngexesha, kufuneka uyihambise kakuhle.
Kubaluleke kakhulu ukugcina ixesha, ukuze ngokuhlwa kusiqale ngokuthandana kwaye kungabikho uxinzelelo. Ukusebenza ixesha elidlulileyo kuncono ngelinye ilanga.
Kwaye ukuba kukho into ekhoyo phakathi okanye iguqula isimo sengqondo, akufanele uchithe ingqondo. Ithuba elitsha lobusuku obusondeleyo luya kubuya ngokukhawuleza.
Kwaye uthanda oko?
Ukwahluka kwexesha lobuhlobo
Ukudibana nentombi okanye umhlobo
Ulwalamano wobudlelwane - umonakalo wokudla
Ubuhlobo obufanayo ngokwesini
I-Wedding Planner Iingcebiso kunye neenkcukacha zomtshato ophumeleleyo
Intsebenziswano - yintoni utshintsho nabantwana?
Umama nobaba kwiholide ngaphandle koonyana
Oyintanda, uSuku lweValentine
Iingoma ezithandwayo zika-intombi okanye intombi
Ukutya okwenzisayo kubini
Kuthetha ukuthini amagama eepilesi?
Uthando - uthando nokulangazelela
Inkondlo yothando - wena nam
Xa umhlobo omhle eba uthando
Yiba ngumzali - hlala othandweni
Utywala nje nge-aphrodisiac
Ubundlobongela kwimpilo yemihla ngemihla
Ukuhlamba kunye nomhlobo okanye intombi
Thatha inyawo kunye nomhlobo okanye umhlobo
Ubuninzi kwimpilo yemihla ngemihla
Ukukhanyiswa - Ukukhwabanisa kuhamba njani?
Ulwakhiwo kunye nomsebenzi wamabele amabhinqa
I-femalegasgasm kunye neengcali
Iingcebiso zesondo ezivela kwiingcali
Ukugcoba ngobuhlobo = ubuqhetseba?
Ukudlala indima kunye nesondo
Soulsex - umnqweno omtsha weqabane
Ukuxoxisana ngesondo - okufuneka kusebenze?
Amaphepha ombala okwenza umbala
Imibala ye-Coloring Men Men & Couples
Imibala ye-color yoga yoga
Umdwebo womsebenzi uchaze isinyathelo ngesinyathelo
Ngaba ulahlekelwa zihloko malunga nobambiswano kunye nobulili? Thetha nathi.
Iingcebiso zeJardin - Idibantictic Garden
Ukuhlwa kakuhle, ubusuku obuhle - amanqaku kunye neetekisi